यी हुन् कोइराला, जसले जिते अञ्जुको मन ! छिट्टै बिहे हुँदै « Ok Janata Newsportal
यी हुन् कोइराला, जसले जिते अञ्जुको मन ! छिट्टै बिहे हुँदै
काठमाडौं । अञ्जु पन्त नेपाली आधुनिक क्षेत्रकी तारा हुन् । उनले गाएका धेरै गीत नेपाली समाजमा रुचाइए ।
‘न बिर्से तिमिलाई, न पाएँ तिमिलाई’, ‘तिमिले पराई ठानेपछि पराई हुन के भयो र’ सर्वाधिक रुचाइएका गीत हुन । जसरी उनले गीत गाएर छलाङ मारिन् त्यसरी आफ्नो जीवन भने सुमधुर बनाउन सकिनन् । यसअघि मनोजराज सँग भएको विवाह लामो समय टिक्न पाएन ।
ऋहिले अञ्जुले छोरी परितोशाको बलका कारण बिहेको तयारी गरेकी छिन् । विवाह गर्न मन नभएको बताउने अञ्जुले अहिले भने अञ्जुली भर्ने साथी पाएकी छिन् । उननले एकवर्ष सम्म प्रेममा रहेका इलाममा थीर कोइरालासँग विवाह गर्न लागेकी हुन् ।
थीर र अञ्जुको धेरै बानी मिल्छ । थीरले अञ्जुलाई माया गर्छन् । उसो त उनीहरु क्रिशियन धर्ममा आस्था राख्छन् । थीरसँगको पहिलो भेट अन्तर्वार्ताका क्रममा भएको अञ्जुले बताइन् ।
अञ्जुका केही गीतमा थीरले संगीत सकेम भरेका छन् । केही वर्षपछि विवाह गर्ने मूड बनाएका दुवै जनाले अब भने छिट्टै बिहे गर्दैछन् । तर, विवाहको धुमधाम तयारी भने नगरिएको अञ्जुले बताइन् । अब केही समय उनीहरुलाई विवाहको तयारीमा लाग्ने छ ।